Fadeexad aad u weyn oo la soo deristay Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee dalka Kenya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Fadeexad aad u weyn oo la soo deristay Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee...
Fadeexad aad u weyn oo la soo deristay Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee dalka Kenya
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya, Noordin Haji, ayaa amar ku bixiyay in la baaro $ 71 milyan oo ah “wax iibsasho aan caadi ahayn” oo ay la xiriirto coronavirus oo ay sameysay Hay’adda Adeegga Caafimaadka ee Kenya (KEMSA).
Previous articleSaddexdan sheeko iyo xalka siyaasadeed ee maanta sidee isu qabtaan?
Next articleDowlada oo laga codsaday in wax kaqabato labo arin oo halis ku ah mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed
Mas’uuliyiin ka tirsan DF oo lagu celiyay Garoonka magaalada Kismaayo & A.Madoobe oo amar bixiyay
Qoor Qoor oo magacaabay Guddiga Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed
Nin in ka badan 90-Haween ah Ceejo ku dilay oo dhintay iyo Warbaahinta oo hadal heysa
Maxaa xilligan ku soo beegay magacaabis RW Kheyre & Xog cusub oo laga helay?
Wararkii Ugu Dambeeyay magacaabista Ra’isul Wasaaraha iyo Shaqsiyaad dhoor ah oo…
DAAWO:SACIID DENI oo u yeeray Jeneraalo uu ku jiro Morgan iyo qorshaha ka dambeeya
Sarkaal Ka Tirsan Sirdoonka Sacuudiga Oo Lagu Eedeynayo Dilkii Jamaal Khashoggi
“Qoondada Haweenka 30% Dastuurka kuma qorna balse waa wax loo gartay Dumarka” Deni.
AKHRISO: Ujeedada Kadambeysa Dhib Udhaca Kuyimid Doorashada Jubaland.